Muse Suudi "kuwa caqligoodu siiyay in ay hantideyda damcaan, taariikhda war uma hayaan, waase laysbaraa"! - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Muse Suudi “kuwa caqligoodu siiyay in ay hantideyda damcaan, taariikhda war uma...
Muse Suudi “kuwa caqligoodu siiyay in ay hantideyda damcaan, taariikhda war uma hayaan, waase laysbaraa”!
Sanator Muuse Suufi Yalaxow oo xubin ka ah Aqalka Sare ayaa ka jawaabay hadal maanta ka soo yeeray Gudoomiyaha Gobolka Eng Yarisow laakiin ay u soo dhiibeen Xassan Kheyre iyo Farmaajo taas oo ahayd in dhulka uu hadda degan yahay uu ka guuro madaama uu dhullku yahay hanti dowlada leedahay.
Muse ayaa dhulka uu hada degan yahay waxa horay si sharci ah ugu wareejisay Dowladii Cabdullahi Yusuf ka dib markii Muse Suudi uu ku wareejiyay dowlada Hub lagu qiimeeyay 2 Milyon oo doolar laakiin dowladii xiligaa jirtay ay awoodi weynday in ay lacagta u celiso Muse Suudi. Muuse ayaa lacagtaas waxaa logu badalay xarun uu horay u deganaa xiligaas.
Muse oo ka jawaabay hadalak ka soo yeeray Eng Yarisow ayaa yiri “kuwa caqligoodu siiyay in ay hantideyda damcaan, taariikhda war uma hayaan, waase laysbaraa”. Muse ayaa sheegay in ayan jirin cid uu ka yeelayo in hantidiisa la boobo oo isaga laga qaado laakiin lagu wareejiyo dad kale.
Sida uu sheegay mid ka mida dadka ku ganacsada Magaalada Muqadishu “dowlada Farmaajo waxa ay ku jirtaa aargoosi ay ku bartilmaamsanayso qabaa’lo gaarka ah”. Xaaji Musue ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu difaacdo hantidiisa hadii ay dowlada diido in ay ku dhaqanto sharciga.